fivoriambe fanamboarana pcb - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Teny lakile: fanamboarana PCB, fitakiana fivoriambe PCB, Fivoriambe PCB Turnkey
Na mila fivoriamben'ny PCB ianao, fanamboarana PCB, fivondronan'ny entana na fivoriambe-fanangonana fitaovana ara-pitaovana turnkey, PCBFuture dia manana izay ilaina hitantanana tsara ny tetikasanao iray manontolo. Nandritra ny traikefa nandritra ny 15 taona mahery tamin'ny serivisy PCB, fantatray fa ny vidin'ny fivoriambe antonony, ny serivisy manara-penitra, ny fandefasana ara-potoana ary ny fifandraisana tsara no lakilen'ny fahafinaretan'ireo mpanjifantsika ary ahoana no fomba nahombiazanay ny orinasanay.
Ny fampanjariam-bola lehibe amin'ny fitaovana dia mila atao alohan'ny hametrahana ny singa elektronika amin'ny asany ary apetaka amin'ny takelaka misy anao toy ny mpanonta stencil mandeha ho azy, ny masinina mifantina sy ny toerana, ny lafaoro fitaratra, ny milina Optical Inspection (AOI), ny masinina taratra X milina fametahana voafantina, mikraoskaopy ary tobin-tsolika.
Satria manolo-tena hihaona amin'ny fotoananao sy ny kalitao takiana izahay dia manambola hatrany amin'ny haitao farany amin'ny fitaovana SMT sy amin'ny lavaka.
Maninona no mifidy anay PCB Fabrication And Assembly:
1. Ekipa injeniera mahatalanjona, mpandahatra fandaharana, mpandraharaha SMT, teknisianina mpanefy ary inspektera QC.
2. Fitaovana manara-penitra miaraka amin'ny SMT farany sy fitaovana mandeha amin'ny lavaka izay ananantsika loharanon-karena tsara indrindra hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fivorian'ny PCB anao.
3. Afaka manome serivisy PCB turnkey izahay izay hanome ny takelaka fanaovana pirinty tsara indrindra ho an'ny tetikasanao.
4. Rafitra manonona sy manafatra ny rafitra an-tserasera.
5. Manam-pahaizana manokana amin'ny hazakazaka kely sy salantsalany amin'ny fotoana mitarika haingana isika.
6. manome vokatra sy serivisy avo lenta avo lenta miaraka amin'ny fandefasana ara-potoana amin'ny vidiny mifaninana tokoa.
7. Ny PCB rehetra anay dia voamarina UL sy ISO.
8. Ny PCB an'ny fenitra rehetra misy anay dia natsangana ho an'ny IPC-A-6011/6012 fanovana farany ny kilasy 2 miaraka amin'ny fanaraha-maso mifototra amin'ny fanovana farany IPC-A-600 Kilasy 2, ankoatry ny takian'ny mpanjifa voatondro.
9. Ireo birao mahazatra rehetra vita pirinty vita pirinty dia voasedra amin'ny herinaratra.
Afaka manome serivisy izahay:
Solaitra FR4 tokana
Solaitra FR4 misy lafiny roa
Jamba teknolojia avo lenta ary nalevina tamin'ny alàlan'ny tabilao
PCBFuture dia manana ny fanohanan'ny serivisy injeniera. Toy ny PCB & Mpanamboatra fivoriambe PCBtsy afaka miroso raha tsy misy ny fanohanan'ny injeniera. Ny ekipanay injeniera dia misy injeniera traikefa maro. Saika ny vokatra malaza rehetra iainan'izy ireo amin'ny fanohanana ny famokarana. Afa-tsy ny traikefa amin'ny famokarana, ny injeniera mivadika dia ao anatin'ny servisiny avokoa. Injeniera dia manome fanampiana matanjaka foana izy ireo amin'ny fivorian'ny PCB.
Manamboatra PCB azo antoka sy fivoriambe.Orinasa mihoatra ny 2000 no miara-miasa aminay satria mihevitra izy ireo fa azo itokisana izahay. Ankehitriny, maro no tonga amin'ny referral avy amin'ny mpanjifa afa-po. Noho ny haitao farany dia azo atao ny manodina sy mampihatra ny tetikasanao amin'ny fomba mahomby sy ho avy-porofo. Ny ahiahin'ireo mpanjifa foana no ifantohany!